Alhazen: Ilay Lazaina fa “Mpahay Siansa Voalohany”
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Galoà Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Lingala Litoanianina Luganda Luvale Macua Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Navajo Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tshwa Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
ANGAMBA ianao mbola tsy nahare momba an’i Abu Ali al-Ḥasan ibn al-Haytham. Alhazen no ahalalana azy any Eoropa sy Amerika. Io ilay fanampin’anarany hoe al-Ḥasan raha amin’ny teny latinina. Azo inoana anefa fa mandray soa avy amin’ny asan’io lehilahy io ianao. Voalaza fa izy no “anisan’ny niavaka indrindra teo amin’ny tantaran’ny siansa ary nisy vokany be ny zavatra nataony.”
Misy milaza fa i Alhazen no “mpahay siansa voalohany.” Nitandrina be mantsy izy rehefa nanao fanandramana.
Izy no nahita voalohany ny fomba fakana sary.
Nikaroka momba ny lopy izy ka ny voka-pikarohana hitany no nahafahana nanamboatra ny solomaso voalohany, mikraoskaopy, ary teleskaopy.
Teraka tao Bassora, any Irak ankehitriny, i Alhazen tamin’ny 965 tany ho any. Anisan’ny nahaliana azy ny astronomia, fitsaboana, fizika, matematika, mozika, poezia, simia, ary ny momba ny maso sy ny hazavana. Inona anefa no zava-bitany tena niavaka?
TOHODRANO TEO AMIN’I NIL
Tamin’ny 1902 no vita ny tohodrano teo amin’ny Reniranon’i Nil. Tao amin’ny tanànan’i Assouan izy io no natao. Efa ho 1 000 taona talohan’izay anefa no nandeha be ny resaka hoe nikasa hanao azy io i Alhazen.
Nipetrapetraka tsara ny planina nataony tamin’izay mba tsy hisy tondra-drano sy hain-tany hisesisesy tao Ejipta. Raha vao ren’i Al-Hâkim, mpanjaka silamo tao Le Caire, ilay hevitra hitan’i Alhazen, dia nasainy nankany Ejipta izy mba hanao an’ilay tohodrano. Rehefa nahita maso an’ilay renirano anefa i Alhazen, dia fantany hoe tsy ho vitany ilay tetikasa, ka natahotra ny hosazin’io mpanjaka tia niovaova hevitra io izy. Mody nanao adala àry izy mandra-pahafatin’ilay mpanjaka tamin’ny 1021, izany hoe 11 taona teo ho eo tatỳ aoriana. Nanam-potoana betsaka nandalinana zavatra hafa izy, tany amin’ny toerana nihazonana azy.
ILAY BOKY MOMBA NY HAZAVANA
Nanoratra boky fito momba ny hazavana i Alhazen. Tany amin’ilay toerana nihazonana azy izy no nanoratra ny ankamaroan’izy ireo. Noheverina ho “anisan’ny boky ilaina indrindra eo amin’ny tantaran’ny fizika” ireo boky ireo. Resahina ao ny andrana nataony mba hahalalana ny toetoetran’ny hazavana, anisan’izany ny hoe ahoana no mahatonga azy io hizarazara ho lasa loko isan-karazany, sy hiverina rehefa midona amin’ny fitaratra, ary hivily lalana rehefa mandalo zavatra roa samy hafa. Nianatra ny mombamomba ny maso koa izy.
Tamin’ny teny arabo ny asa soratr’i Alhazen. Voadika tamin’ny teny latinina izy ireny tamin’ny taonjato faha-13. Nampiasa azy ireny ny manam-pahaizana eoropeanina nandritra ny an-jatony taona. Nanoratra momba ny toetoetran’ny lopy i Alhazen, ary tena nanampy an’ireo mpanao solomaso tany Eoropa ilay izy. Nahavita namorona teleskaopy sy mikraoskaopy mantsy izy ireo, rehefa nataony milahatra ireo lopy.
I Alhazen no voalaza fa olona voalohany nanamboatra “efitra maizina” fakana sary. Misy lavaka kely idiran’ny hazavana eo amin’ilay izy. Lasa tazana eo amin’ny rindrina anatin’ilay efitra àry ny sarin’izay zavatra any ivelany, saingy mivadika ilay sary.
Azo inoana hoe i Alhazen no namorona ny fomba fakana sary
Lasa nisy takelaka nampiasaina, tamin’ny 1800 tany ho any, mba hitehirizana ny sary azo. Nanjary nisy àry ny fakan-tsary. Hoatran’ny fomba fakana sary tao amin’ilay efitra ihany ny fomba fakana sary amin’ny fitaovana maoderina. Hoatr’izany koa ny ataon’ny masontsika. *
FOMBA FIASAN’NY MPAHAY SIANSA
Nandalina ny zava-misy eo amin’ny natiora i Alhazen, ary nitandrina be rehefa nanao fikarohana. Anisan’ny tena nampiavaka azy izany. Tsy nahazatra ny olona tamin’ny androny ilay fomba fiasany. Anisan’ireo voalohany nanao andrana izy mba hanaporofoana raha marina ny teoria iray na tsia. Tsy natahotra nilaza ny heviny izy, rehefa tsy voaporofo hoe marina ilay izy.
Azo fintinina toy izao ny fitsipika mifehy ny siansa maoderina: “Porofoy izay inoanao!” Misy milaza fa i Alhazen no “nisantatra ny fomba fiasan’ny mpahay siansa amin’izao.” Tena mankasitraka azy isika noho izany.
^ feh. 13 Tsy tena azon’ny Tandrefana hoe inona no mampitovy ny masontsika amin’ilay efitra maizina fakana sary, raha tsy nohazavain’i Johannes Kepler, tamin’ny 1604.
“Nampianatra An’izay Tokony Hataon’ny Mpahay Siansa Izy”
Milaza ny mpanoratra iray atao hoe Jim Al-Khalili fa ‘tsy ny zava-baovao hitan’i Alhazen’ no tena nahatonga azy ho lasa andrarezina, “fa ny nampianarany antsika hoe ahoana no tokony hataon’ny mpahay siansa.” Voalaza fa “tena boky momba ny siansa” ilay bokiny momba ny hazavana. Hita ao amin’ny an-tsipiriany mantsy ny mombamomba ny andrana nataony, ny fitaovana sy ny refy nampiasainy, ary ny vokatra azony.